२२ घन्टामै नगरपालिकाको सबै मत गनिसक्ने निर्वाचन अधिकृतको अनुभव :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
२२ घन्टामै नगरपालिकाको सबै मत गनिसक्ने निर्वाचन अधिकृतको अनुभव
कसरी उनले यति धेरै मत गने? अरू पालिकाले के सिक्न सक्छन्?
करिब दुई लाख मत खसेको काठमाडौं महानगरपालिकामा पछिल्लो २४ घन्टामा जम्मा छ हजार मतगणना भएको छ। यही गतिमा गणना भए काठमाडौंको निर्वाचन परिणाम आउन ३० दिन लाग्ने देखिन्छ।
यो अवस्था काठमाडौंको मात्र होइन। थोरै जनसंख्या भएका साना स्थानीय तहबाहेक देशभरका अधिकांश ठाउँमा मतगणनाको गति अत्यन्तै सुस्त छ। काठमाडौंजस्ता महानगर र धेरै जनसंख्या भएका उपमहानगर र नगरपालिकाहरूमा त मतपरिणाम यति ढिलो आइरहेको छ, अन्तिम नतिजा घोषणा हुँदासम्म उम्मेदवारहरूको दारीजुंगा फुलिसक्छ भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यधरि कसिसके।
कछुवा गतिमा भइरहेको मतगणनाबीच गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका भने छिटो गणना सकेर छिटो परिणाम घोषणा गर्नेमा उदाहरण बनेको छ।
रेसुंगा नगरपालिकामा मतगणना सुरू भएको २२ घन्टामै परिणाम घोषणा भएको हो। यहाँ नेपाली कांग्रेसका खिलध्वज पन्थी ८ हजार ६ सय १४ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्ड्येले ७ हजार ३ सय २० मत ल्याएका छन्।
उपमेयरमा कांग्रेसकै अमृतादेवी कुँवर ८ हजार १९ मत ल्याएर विजयी भएकी छन्। उनका निकट प्रतिद्वन्द्वी एमालेकी रिता पाण्डेले ७ हजार २ सय ३१ मत ल्याइन्।
रेसुंगाको मतगणना गति यस कारण पनि उदाहरणीय छ, किनभने यो थोरै जनसंख्या भएको स्थानीय तह होइन। साढे ३२ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको यो नगरपालिकामा १४ वटा वडा छन्। यहाँ १८ हजार ८ सय ७० मतदाता रहेकामा करिब ७० प्रतिशत मत खसेको थियो। यो भनेको १३ हजार २ सय ९ हुन्छ।
यसरी चौबीस घन्टा नबित्दै १३ हजारभन्दा बढी मत गनेर परिणाम घोषणा गर्न भ्याएको रेसुंगा नगरपालिकाको सफलताको कारण के हो? यहाँको मतगणनामा कुन त्यस्तो सूत्र लगाइयो जसले परिणाम यति छिटो आउनसक्यो?
यसका लागि हामीले रेसुंगा नगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीसँग उनको अनुभव सोधेका छौं।
गुल्मी जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रहेका उप्रेती आफैं पनि २२ घन्टामै गणना सकेर मतपरिणाम घोषणा गर्न सकेकामा प्रसन्न र सन्तुष्ट सुनिए।
'हामीले शुक्रबार राति साढे ११ बजेबाट गन्न सुरू गरेका थियौं,' उनले सेतोपाटीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, 'शनिबार राति साढे ९ बजेसम्म सबै गणना पूरा गरेर निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न सफल भयौं।'
निर्वाचन आयोगले तोकेको गणना विधिभन्दा आफूहरूले फरक ढंगले काम गरेको र त्यही कारणले छिटो नतिजा आएको उनी बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगले एक साताभित्रै मतगणना पूरा गर्ने गरी काम गर्न सबै निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यसका बाबजुद अहिलेको गणना गति हेर्दा एक साताको लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ। अघिल्लो स्थानीय चुनावमा पनि यसैगरी मत गन्न लामो समय लागेपछि आयोगले बीचैमा हस्तक्षेप गरेर छिटो सक्नू भन्नुपरेको थियो।
रेसुंगाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीका अनुसार आयोगले प्रत्येक मतपेटिकाबाट मतपत्रहरू खसालेपछि त्यसलाई घोप्टो पारी ५०–५० वटाको मुठा पारेर एक–एकवटा गन्नू भनेको छ।
'हामीले भने सर्वदलीय बैठक गरेर सबैको सहमतिमा अलिकति फरक ढंगले गणना गर्‍यौं,' उनले भने, 'हामीले मतपेटिकाबाट मतपत्रहरू खसालेपछि सबभन्दा पहिला एकछापेवाला मतपत्र छुट्टयाएर अलग–अलग राख्यौं।'
भन्नुको मतलब, प्रत्येक मतपेटिकाबाट जुन–जुन मतपत्रमा सूर्य, रूख वा अन्य कुनै पार्टीको चिह्नमा एकछापे भोट लागेको छ, त्यसलाई छुट्टयाएर अलग–अलग चाङ लगाइयो। सूर्य छाप एउटा चाङमा राखियो भने रूख छापलाई अर्को चाङ लगाइयो।
'यसरी एकछापे मतपत्रहरू अलग–अलग चाङ लगाएपछि हामीले सबै दलका प्रतिनिधिहरूको आँखाअगाडि ती एकछापे मतपत्र नोट गनेजस्तै गन्यौं,' उप्रेतीले भने, 'हरेक बाकसबाट एकछापे मतपत्र मात्र पहिला गन्दा झन्डै ७५ प्रतिशत मतपत्रको गणना आधा घन्टाभित्रै सकियो।'
बाँकी मिश्रित भोटवाला मतपत्र भने आयोगले भनेजस्तै घोप्टो पारेर ५०–५० वटाको मुठा बनाइएको र सबै उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई देखाउँदै एक–एक गरी गनेको उनले बताए।
गणनामा सबभन्दा बढी समय यस्तै मिश्रित मतपत्र गन्न लागेको उनले जानकारी दिए।
अन्य स्थानीय तहको मतगणना क्रममा आयोगले भनेजस्तै ५०–५० वटा मतपत्रको मुठा पारेर गन्ने गरिएको छ। यसो गर्दा एकछापे र मिश्रित दुवैखाले मतपत्र गन्न समय लाग्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
'बाकसबाट मतपत्र खसाल्नेबित्तिकै एकछापे मतपत्र छानेर पहिला गन्ने हो भने आधा काम छिट्टै सकिन्छ, बाँकी आधाका लागि मात्र बढी समय लाग्ने हो,' उनले भने।
उनले गुल्मीका अन्य स्थानीय तहमा पनि यही विधिअनुसार गणना गर्न सुझाव दिएको बताएका छन्।
उनले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यही विधिबाट गणना गरेका थिए। त्यति बेला उप्रेती जनकपुर अदालतमा थिए। त्यहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुँदा अहिलेजस्तै २४ घन्टाभित्रै मतगणना सकेर परिणाम घोषणा गरेको उनी बताउँछन्।
गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीले अपनाएको यो विधि सबै ठाउँमा उत्तिकै उपयोगी नहुनसक्छ। एकछापेभन्दा मिश्रित मत बढी खसेका ठाउँमा यो विधि त्यति प्रभावकारी नहोला। यति हुँदाहुँदा अहिलेको गणनाभन्दा छिटो पक्कै हुनसक्छ।
अर्कातिर सबै ठाउँका निर्वाचन अधिकृतहरूले सर्वदलीय सहमतिमा थोरै सुझबुझ देखाउने हो भने मतगणना छिटो गर्ने कुनै अर्को विधि पनि निस्केला। त्यसो गर्दा गणकहरूलाई सजिलो हुने उप्रेती बताउँछन्।
धेरै ठाउँमा अहिले पनि मतगणनाको हाँपदाप छ, रेसुंगा नगरपालिकामा भने जित्नेहरू विजय जुलुस निकाल्न थालिसके, गणकहरू आराम गर्दै छन्।
'तपाईंले फोन गर्दा म त सुतिरहेको थिएँ, घन्टी बजेको बज्यै गरेर ब्युँझेको,' उप्रेतीले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १, २०७९, ०६:१५:००